W3C waxay siisay heerka caadiga ah ee WebRTC | Laga soo bilaabo Linux
W3C waxay siisay heerka caadiga ah ee WebRTC
W3C ayaa daaha laga qaaday dhawaan iyada oo loo marayo ogeysiis ah in API-ga la xiriira WebRTC waxay noqotay heer lagu taliyay.
Isla mar ahaantaana, guddiga IETF (Internet Engineering Task Force), oo u heellan horumarinta borotokoolka iyo qaabdhismeedka Internetka, ayaa daabacay 11 RFCs (8825-8835, 8854) oo qeexaya qaab dhismeedka, astaamaha hab-maamuleedka, qaababka gaadiidka iyo farsamooyinka sixitaanka qaladka ee loo adeegsaday WebRTC. RFC-yadaani hadda waxay leeyihiin xaaladda 'Heerka La Soo Bandhigay'.
Kuwa aan aqoon u lahayn tiknoolajiyada WebRTC, waa inay ogaadaan taas tan waxaa soo saaray Google tan iyo 2009 sida muuqaalka fikradda abuuritaanka barxad isgaarsiineed oo loogu talagalay daalacashada, beddelka Adobe Flash iyo codsiyada desktop.
Sanadkii 2011, Google waxay soo saartay horumarinteeda la xiriirta WebRTC, iyo sidoo kale teknoolojiyada maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga ee laga helay helitaanka GIPS, oo ah shirkad farsameysa calaamadaha dijitaalka ah, iyadoo loo marayo shatiga BSD.
Isla mar ahaantaana, - helitaanka bilaashka shatiyadaha daboolaya WebRTC ayaa la bixiyay, Iyaga oo ay weheliyaan Mozilla, Microsoft, Cisco iyo Ericsson, nidaamka habeynta WebRTC wuxuu ka bilaabmay W3C iyo IETF.
Tan iyo markaas, Taageerada WebRTC waxaa lagu hirgeliyay dhammaan daalacayaasha casriga ah waxayna ku sii fiday barnaamijyada isgaarsiinta, barnaamijyada moobiilka iyo adeegyada webka ee u baahan in la abaabulo marin toos ah oo isgaarsiineed oo u dhexeeya dadka isticmaala.
Tusaale ahaan, si wax yar looga fahmo baaxadda ay WebRTC horeba u lahayd, taasi waa taas Tan waxaa si weyn loogu adeegsadaa codsiyada shirarka fiidiyowga iyo maqalka.s, ciyaaraha, barnaamijyada iskaashiga, farriinta degdegga ah, nidaamyada qulqulka iyo qaybinta waxyaabaha.
WebRTC wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo aasaasi ah: nidaamka maareynta kalfadhiga isticmaalaha, mashiinka maqalka maqalka, mashiinka wax lagu farsameeyo fiidiyowga, iyo lakabka gaadiidka. Mashiinnada maqalka iyo fiidiyowga ayaa u oggolaanaya isticmaalka koodhadh kala duwan (VP8, H.264), iyo sidoo kale hababka xakamaynta buuqa.
Dhammaan xogta waxaa lagu gudbiyaa oo keliya qaab sir ah. Xilliga gudbinta xogta waqtiga-dhabta ah, DTLS iyo SRTP (Nidaamka Gaadiidka Badbaadada ee Waqtiga Rasmiga ah) waxaa loo isticmaali karaa iskudarka teknoolojiyada si loo abaabulo wadiiqooyinka isgaarsiinta P2P loona hubiyo hawlgalka iyadoo loo marayo darbiyada dab-demiska iyo turjubaanka cinwaanka (ICE, STUN, TURN, RTP-over- TCP, awoodda lagu shaqeynayo wakiil).
Marka lagu daro qaybaha aasaasiga ah ee saldhigga ah, ka W3C iyo IETF sidoo kale waxay sameynayaan kordhin aan wali la ansixin taas oo u oggolaanaysa adeegsiga borotokoolka 'QUIC' gaadiid ahaan iyo oggolaanshaha isticmaalka koodhka AV1 video.
Koox shaqo ayaa loo sameeyay si loo horumariyo WebTransport API, taas oo fududeyneysa abaabulka gudbinta dad badan oo qaata, iyo Scalable Video Encoding API, si loogu waafajiyo gudbinta fiidiyowga ee xadka macaamiisha.
Nooca xiga ee WebRTC, sidoo kale awoodaha ayaa la isticmaalayaa sida qarsoodi-ilaa-dhamaadka sirta shirarka fiidiyaha, ka shaqeynta tooska ah ee maqalka iyo muuqaalka fiidiyowga (oo ay ku jiraan adeegsiga nidaamyada barashada mashiinka), macnaheedu waa sameynta kanaal isgaarsiineed oo joogto ah oo leh dareemayaal aaladaha IoT ee horumarsan.
getUserMedia: ka hel durdur-warbaahin fara badan (fiidiyow, cod) aaladda deegaanka ku xiran (kamarada webka, makarafoonka, kamarada fiidiyaha) ama feyl.
Xiriirinta RTCPeer: sameynta xiriir toos ah oo udhaxeeya dadka isticmaala, sameynta calaamadaha, la shaqeynta koodhadhka, xakamaynta xadka, abaabulka kanaalka isgaarsiinta oo aamin ah.
RTCDataChannel: xog isweydaarsi aan macquul ahayn oo ku saabsan kanaal isgaarsiineed oo laba dhinac ah adoo adeegsanaya heerka WebSockets API.
getStats: helitaanka tirakoobka.
Ugu dambeyntiina, haddii aad xiiseyneyso inaad wax badan ka ogaato, waad la tashan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » W3C waxay siisay heerka caadiga ah ee WebRTC
Movim: Isha Furan ee Barnaamijka Baahiyaha Bulshada ee baahsan